Ahoana ny fametrahana ireo mpitari-dàlana "lehilahy" amin'ny teny espaniola ao amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Na dia tsy ilaina mandritra ny fotoana ela aza, ny baiko dia mbola be mpampiasa amin'ny rafitra fiasa GNU / Linux. Ny olana dia misy safidy maro dia maro atolotray antsika ka tsy azo atao ny manao tsianjery azy rehetra. Soa ihany fa misy baiko azontsika ampiasaina mba hahazoana vaovao momba ny baiko hafa: iray. Ny baiko hoe "man -option" dia hanome boky kely antsika, izay saika misy baiko rehetra, fa ny vaovao, toy ny mahazatra dia amin'ny teny anglisy.
Ahoana raha te hanana an'ity boky fampianarana ity amin'ny Espaniôla isika? Eny, toy ny saika ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Linux, dia mila manana dingana kely vitsivitsy handikana azy ireo isika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba fametrahana ireo fonosana ilaina hametrahana ireo boky torolalana amin'ny fiteninay.
Fanoroana «lehilahy» amin'ny teny Espaniola
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny manokatra terminal ary kitiho ity baiko manaraka ity:
Manaraka izany, ao amin'ny terminal dia manoratra izao manaraka izao izahay:
Raha vantany vao miditra amin'ny Intro isika dia hahita varavarankely toa ity manaraka ity. Ny hany tokony hataontsika dia ny manaiky.
Ary, farany, manaiky indray izahay, fa tsy alohan'ny hamaritana fa hisafidy ny kinova Espaniola tadiavinay. Hanomboka hisintona ny fampahalalana ilaina izany ary, rehefa vita, dia hanana boky fampianarana vitsivitsy amin'ny teny espaniola izahay.
Mety nahatsikaritra ianao fa efa nanonona "manuals" vitsivitsy aho teo aloha. Satria na dia nametraka ireo fonosana ilaina aza isika dia misy maro amin'ireo boky fampianarana ireo izay hitohy amin'ny teny Anglisy. Ohatra, raha manokatra terminal sy karazana isika lehilahy apt Ho hitantsika fa amin'ny teny Anglisy daholo ny fampahalalana rehetra. Etsy ankilany, raha manoratra isika man install Ho hitantsika ny fomba hanehoana amintsika ny vaovao rehetra amin'ny Espaniôla tonga lafatra.
Farany, tiako ny hanazava kely etsy ambony ny fomba handehanana amin'ireto boky torolalana ireto:
Ny lakilasy miakatra sy midina dia hanao araka izay asehon'ny anarany.
Ny lakilen'ny Q dia hanaisotra antsika tsy hampiasa ilay boky.
Ny lakile H dia hampiseho amintsika fampahalalana fanampiny (ao anatin'ireto teboka telo ireto).
Efa napetrakao amin'ny Espaniola ve ireo boky fampianarana anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fametrahana ireo mpitari-dàlana "lehilahy" amin'ny teny espaniola ao Ubuntu
felixbn dia hoy izy:
Manome ahy lesoka izany:
E: Tsy hita ilay fonosana fitantanana
E: Tsy hita ilay fonosana manpages-es-extra
Misaotra ny pejinao, tsara ho an'ireo vao manomboka toa ahy.
Mamaly an'i felixbn
Salama, felixbn. Tokony ho ao amin'ny tahiry repositories. Miezaha mametraka sudo apt fanavaozana voalohany ao amin'ny terminal hanavao ireo trano fitahirizana ary manandrama indray.
ny zavatra rehetra vonona tsy misy kilema.
rvs dia hoy izy:
Valio ny RV
vita! Misaotra anao!
Joan Fornes dia hoy izy:
Ry Pablo Aparicio malala (mpanoratra an'ity lahatsoratra ity momba ny fametrahana ilay lehilahy ho mpitari-dalana amin'ny teny espaniola ao amin'ny rafitra fiasa GNU / Linux antsoina hoe Ubuntu).
Tokony holazaiko fa ity lahatsoratra ity dia tsy miasa amin'ny kinova farany an'ny Ubuntu 20.04.1 LTS Focal Fossa. Inona no tokony hataoko mba hahazoako mpitari-dalana amin'ny fiteny espaniola?
Miarahaba anao avy any Espana.
Valiny tamin'i Joan Fornés
Gabriel Robles dia hoy izy:
Amin'ity tranga ity dia apetraho fotsiny ny eo an-toerana sudo dpkg-reconfigure dia ho hitanao mafy ilay boky amin'ny teny anglisy rehefa tonga amin'ny alàlan'ny default.
Valiny tamin'i Gabriel Robles
Jesosy Correa dia hoy izy:
Raha toa ka toy izany ny baiko hoe "sudo apt install manpages-es manpages-es-extra" dia miteraka hadisoana izany, manatanteraka fotsiny "sudo apt install manpages-es-extra" ary miaraka amin'izany no nametrahana ilay fonosana tsy nisy olana.
Mamaly an'i Jesosy Correa
Elementary Tweak, fitaovana tsara ho an'ireo mpampiasa Elementary OS
Alan Pope dia nanambara ny Meizu PRO 5